एक सामाजिक मिडिया गुरु भाडामा लिएको वास्तविक कारण Martech Zone
पछिल्लो दशकमा, मैले एक अनलाइन निम्न, अधिकार, र अन्ततः एक फलिफ्री निर्माण गर्न अथक प्रयास गरें व्यापार। अब, म ती मानिसहरुसँग सामना गर्दै छु जसले मेरो सेवाहरु भाँडा लिन चाहान्छन् ताकि म त्यसो गर्न मद्दत गर्न सक्छु। कहिलेकाँही यो अविश्वसनीय प्रतिभाको साथ एक ठूलो कम्पनी हो र म डेलिभर गर्न सक्षम हुँ। कहिलेकाँही त्यो केस हुँदैन र म फरक सेवा प्रदान गर्छु।
यी बर्षहरूमा मैले अरूलाई अनलाइन पार गरेको देखेको छु र धेरै कुरा पनि सिकेका छन्। मैले धेरै अरूलाई पनि पछाडि पार गरें ... धेरै थोरैमा प्रकाशित पुस्तक वा उनीहरूको आफ्नो व्यवसायको व्यवसायको बारेमा उनीहरूको दक्षता छन्। यसले मलाई के काम गर्छ, के काम गर्दैन, के लगानीले तपाईंको अधिकार जम्पस्टार्ट गर्न सक्दछ, साथ साथै यसले वास्तवमा कसरी बिगार्न सक्छ भनेर अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ।
जे होस्, त्यो सबै ज्ञान साँच्चिकै कारण होईन किनकि तपाईं मलाई भाँडामा लिन चाहनुहुन्छ। त्यो जानकारी बाहिर छ ... यो मेरो ब्लग पोष्ट मार्फत अनलाइन हो, मेरो व्यवसाय ब्लगिंग पुस्तक, र मेरो प्रस्तुतीकरण। यदि तपाईं मेरो अनुसरण गर्नुहोस्, वा अन्य कुनै पनि तथाकथित सामाजिक मिडिया गुरुहरु, वास्तवमै तिनीहरू सबै जानकारी बाहिर नि: शुल्क राख्न। पक्का - धेरै दुर्घटना पाठ्यक्रम प्राप्त गर्न कन्डन्स्ड प्रशिक्षण अवसरहरू प्रस्ताव गर्छन् (यो हामीलाई बोलेको हेर्नुको एक उत्तम कारण हो) ... तर कुरा यो हो कि तपाईंले अझै पनि हामीलाई काममा नलिन यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
के तपाईं नि: शुल्क पाउन सक्नुहुन्न त्यो हाम्रो अधिकार हो। सामाजिक मिडिया गुरुहरूको राम्रो अनुसरण हुन्छ - सामान्यतया एक राम्रो कोनाका भित्र। मेरो आला अनलाइन मार्केटिंग, इनबाउन्ड मार्केटिंग र व्यवसाय, निर्माण गर्न सामाजिक र अन्य अनलाइन टेक्नोलोजी समावेश गर्दै छ। जबकि म ती विषयहरूमा धेरै कम्पनीहरूसँग परामर्श गर्दछु - अन्य कम्पनीहरू जसले मेरो सेवाहरूमा लगानी गर्छन् बिल्कुलै फरक कुराको खोजी गर्दैछन् ...
तिनीहरू मेरो खोजी गर्दैछन् समर्थन त्यसो भए तिनीहरूले गर्न सक्छन् अधिकार निर्माण छिटो ... साथै मेरो श्रोताको लागि पहुँच.
प्रशंसकहरू, अनुयायीहरू, पाठकहरू र ग्राहकहरू आजकलको मूल्यवान वस्तु हो ... विशेष गरी यदि तपाईं यसलाई निम्न बढ्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ। केही व्यक्तिहरू मलाई बोल्न भन्छन् किनकि उनीहरू मेरो प्रस्तुतीकरणहरू देखेका छन् र रमाएका छन् - तर धेरै अरूले मलाई बोल्न आग्रह गर्छन् किनकि उनीहरूलाई थाँहा हुन्छ कि म तिनीहरूको व्यवसाय वा उनीहरूको सम्मेलनलाई मेरो श्रोताको लागि प्रचार गर्छु। यदि म बोल्छु भने - म यो एक महान घटना हुन चाहान्छु ... सबै इन्टरनेटमा बजको साथ बिक्रि भयो। सबै इमान्दारीतामा, म सहभागी नभएको कार्यक्रम प्रमोट गर्ने थोरै अवसरहरू छन् ... म उनीहरूको इमानदारीसाथ प्रचार गर्नको लागि पर्याप्त उत्साहित हुँदैनु ... र मेरो दर्शकहरूले भन्न सक्दछन्।
त्योले भन्यो, म आफ्नो बोल्ने अवसर र समर्थनलाई गम्भीरताका साथ लिन्छु। म केवल स्रोतमा विश्वास नगरी एक पृष्ठभूमिमा टस गर्दैनौं - मलाई त्यस्तो भत्ता परेको भए पनि। म धेरै कम्पनिहरु संग काम गर्दछु जुन मैले कहिले अनलाइन उल्लेख गरेको छैन। यो त्यस्तो होइन कि म उनीहरूलाई योग्यको रूपमा विश्वास गर्दिन, किनकि यो मेरो दर्शकहरूमा उनीहरूलाई उल्लेख गर्नु अप्रासंगिक हुनेछ। परिचय ठाउँबाट बाहिर जबरजस्ती हेर्नेछ।
म संख्या मा छक्क छु सामाजिक मिडिया गुरुहरु कि भुक्तान पोष्टहरु, भुक्तान ट्वीटहरु र भुक्तान अनुमोदन प्रदान गर्दछ उनीहरूले उनीहरूको दर्शकलाई मूल्य प्रदान गरेको सुनिश्चित बिना। उनीहरूसँग पनी आकर्षक फोटोहरू राखिए उनीहरूको छेउमा खडा हुँदै कुनै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई एक अर्थ प्रदान गर्न को लागी उनीहरू महत्त्वपूर्ण हुनु पर्छ ... माथि फोटो हेर्नुहोस्;)।
म यी कार्यनीतिहरूबाट जोगिन हर प्रयास गर्छु ... दर्शकहरूको लागि अपमान हुनेछ मैले निर्माण गर्न कडा मेहनत गरेको छु र अन्ततः उनीहरूलाई जोखिममा राख्छु। मलाई लाग्छ कि यो एक छोटो अवधि को रणनीति नगद छ - र यो समय संग आफ्नो श्रोताको अवमूल्यन गर्दछ। धेरै पैसा अनलाइन गुरु बनाउँनुहोस् यो गर। तिनीहरूले धोखा दिन्छन् र केवल अनलाइन खरीद गर्नुपर्दछ उनीहरूले अनलाइन बनाएको फुलेको व्यक्तित्वसँगै रहनको लागि। उनीहरूका दर्शकहरू आउँछन् र जान्छन् कि तिनीहरू चोर्छन्।
यदि तपाईं साँच्चिकै ठूलो अनलाइन उपस्थिति रaको दर्शकहरूको पहुँच चाहानुहुन्छ भने सामाजिक मिडिया गुरु, यो गर्न को सजिलो साधन एक महान भाँडामा छ सामाजिक मिडिया गुरु यससँग निम्न कुरा छन् जुन तपाईं पहुँच प्राप्त गर्न र यसको साथ अधिकार निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ। FTC दिशानिर्देश अन्तर्गत, मँ सँधै भन्छु कि तिनीहरू एक ग्राहक हुन् वा मलाई मेरो समर्थनको लागि क्षतिपूर्ति दिइनेछ। किनकि म मेरो बक्रीलाई फ्याँक्न चाहने कसैलाई मेरो श्रोतालाई हैरानी पार्न सावधान रहन्छु, मेरा दर्शकहरूले ध्यान दिँदैनन् कि मैले यसको लागि भुक्तान गरें। तिनीहरू मान्यता प्राप्त छन् कि मेरो भुक्तान अनुमोदनहरू पनि सँधै मूल्य प्रदान गर्दछ।
एक सोशल मिडिया गुरुलाई काममा लगाउँदा तपाईंलाई मुख्य जानकारी र परामर्श प्रदान गर्न सक्छ जुन तपाईंको व्यवसायलाई चलाउन मद्दत पुर्‍याउँछ… तर एकजनालाई भाँडामा लिनुको वास्तविक कारण भनेको उनीहरूको श्रोताको लागि अधिकार प्राप्त गर्नु हो र समर्थनको माध्यमबाट अधिकार पाउनु हो। यो बिना, तपाईको अगाडि लामो सडक भयो। यसको साथ, तपाईं आफ्नो सामाजिक मिडिया उपस्थिति र अनलाइन अधिकार जम्पस्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
टैग: douglas karrसेठ Godinसामाजिक मिडिया गुरु
के तपाईंले वेबमास्टरहरूमा प्यारामिटरहरू सेट अप गर्नुभयो?
तपाईंको श्रोताको भाषामा बोल्दै